Soo-gaadhista la mid maaha Saamaynta: Waa Waqtigii la Joojin lahaa Isticmaalka Dareenka si loo Qiimeeyo Qiimaha | Martech Zone
Waa maxay Impressions?
Aragti waa tirada isha ee laga yaabo inay ku dhacdo sheekadaada ama boostadaada bulshada iyadoo lagu saleynayo akhristayaasha / daawadayaasha shabakada / isha.
Sannadka 2019, aragtiyaha qolka ayaa laga qoslayaa. Maaha wax aan caadi ahayn in lagu arko aragti balaayiin ah. Waxaa jira 7 bilyan oo dad ah oo adduunka ah: illaa 1 bilyan oo iyaga ka mid ah ma haystaan ​​koronto, inta badanna kuwa kale dan kama lihi maqaalkaaga. Haddii aad haysatid 1 bilyan oo aragti ah laakiin aad ka baxdo albaabkaaga oo qofna uusan kuu sheegi karin maqaalka, waxaad leedahay metric been ah. Maaha in la xuso, intee in le'eg dareenkaaga xiriirka bulshada ayaa ah bots kaliya:
Bots-ka ayaa ku dhowaad 40% dhammaan taraafikada internetka ee 2018.
Shabakadaha Distil, Warbixin Xun Xun 2019
Ka fikir warbixinnadaada dib-u-ururin saddex-biloodlaha ah inay yihiin heshiis u dhexeeya hay'ad iyo hay'adda PR ama adiga iyo madaxaaga u dhexeeya - tani waa sida aan u qeexi doonno guusha iyo sida aan ugu heshiinay inaan cabirno. Waxaa laga yaabaa inaad wali u baahan tahay inaad soo bandhigto aragti sababtoo ah macmiilkaaga ama maamulahaaga ayaa weydiisanaya iyaga. Si kastaba ha noqotee, khiyaanadu waa in la sameeyo laba waxyaalood:
Bixi Macnaha guud on dareenkaa kuwa
Bixi qiyaaso dheeri ah taasi waxay sheegaysaa sheeko ka sii wanaagsan.
Beddelka cabbiraadda xiriirka dadweynaha waxaa ka mid noqon kara:
Tirada raadadka ama beddelka. Dareenkaaga ayaa laga yaabaa inuu kor u kaco rubuc illaa rubuc, laakiin iibkaagu weli wuu fidsan yahay. Taasi waa sababta oo ah inaadan bartilmaameedsanin dadka saxda ah. Hesho dareen ah inta hogaamin ee aad abuureyso.
Tijaabinta baraarujinta: Adoo adeegsanaya aalad sida Daanyeer Survey, meeqa qof ayaa ku arkay badeecadaada ama waxqabadkaaga warka oo ku dhaqaaqay ama dabeecad u beddelay dartiis?
Google Falanqayntas: Ka raadi jiqda taraafikada shabakadda markay wararkaagu socdaan. Haddii maqaalku ka kooban yahay gadaal gadaal, raadi inta qof ee dhabtii riixday boggaaga maqaalka oo arag inta jeer ee ay halkaas ku qaateen.
A / B imtixaanka. Ku dhawaaq badeecad ama iib cusub adoo adeegsanaya warbaahinta iyo warbaahinta bulshada laakiin waxaad siisaa nambarro xayeysiin kala duwan ah si loo go'aamiyo midka kexeeyey taraafikada badan (warbaahinta ama bulshada).
Falanqaynta farriinta: Immisa ka mid ah farriimahaaga muhiimka ah ayaa lagu soo daray maqaallada? Tayada ka badan tirada ayaa ka muhiimsan.
Tixgeli tan: iska dhig inaad qol kula jirto tartamayaashaada. Waxa laga yaabaa inaad qayliso kan ugu qaylada badan-laakiin tartamayaashaada aamusan ayaa isticmaalaya PR si ay u wadaan iibinta, kordhinta wacyiga, iyo isbeddelka dhimbiilaha.
PR-ga wanaagsan wuxuu ku saabsan yahay adeegsiga warbaahinta si uu isbedel u sameeyo-iyo helitaanka cabbiro sax ah si loo arko haddii ay shaqeynayaan.
Tags: imtixaanka abwacyigaBots